नेपालले भारतलाई मोबाइल फोन र सोसल मिडियाको प्रयोगमा जित्यो ! - Tamang Online
नेपालले भारतलाई मोबाइल फोन र सोसल मिडियाको प्रयोगमा जित्यो !
काठमाडौं । मोबाइल र सामाजिक सन्जालको प्रयोगमा नेपालीले भारतीयलाई जितेका छन् । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पछिल्लो सर्वेक्षणले भारतीय भन्दा नेपाली जनता प्रबिधिको प्रयोगमा अगाडि देखिएका छन् ।
ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएका १८ देशका करिब ४० हजार सर्वसाधारणमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई जनता मोइबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको छ ।
आईडीआरसी, सीआरडीआईलगायतका संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ७२ प्रतिशत नेपालीसँग मोबाइल फोन रहेको पाइएको छ । जबकी डेक्सटप कम्प्युटर र ल्यापटप प्रयोगकर्ता भने ५ प्रतिशतमात्र छन् ।
सर्वेक्षण गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता अर्जेन्टिनामा ९२ प्रतिशत रहेका छन् । जबकी नेपालको छिमेकी विशाल मुलुक भारतमा ६१ प्रतिशत जनतासँगमात्र मोबाइल छ । यो नेपालभन्दा ११ प्रतिशतले कम हो ।
नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता शहरकामात्र होइन गाउँका जनता पनि लगभग उत्तिकै छन् । सर्वेक्षणका अनुसार शहरी क्षेत्रमा ७६ प्रतिशतसँग मोबाइल छ भने गाउँमा ६५ प्रतिशतको हातमा मोबाइल छ ।
नेपालमा ८० प्रतिशत पुरुष र ६५ प्रतिशत महिलाले मोबाइल प्रयोग गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । भारतमा भने ४३ प्रतिशत महिलाले मात्र मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अझ रोचक तथ्यांक चाहिँ के छ भने, नेपालमा सून्य आय भएका ६५ प्रतिशतसँग मोबाइल फोन छ । यसको कारण भनेको परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारी र शहरी क्षेत्रमा हुनु र उनीहरुले घरमा कुरा गर्नका लागि मोबाइल उपलव्ध गराउनु रहेको हुनसक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
मोबाइल प्रयोगकर्ता नेपालीमध्ये ५२ प्रतिशतसँग स्मार्टफोन छ भने ४० प्रतिशतसँग कुरामात्र गर्न मिल्ने आधारभूत फोन छ । जबकी स्मार्ट फोन उत्पादन हुने भारतमा भने २८ प्रतिशतसँगमात्र स्मार्टफोन रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
स्मार्टफोन प्रयोगकर्तामध्ये ४७ प्रतिशत ग्रामिण भेगका छन् । तीमध्ये करीव ६५ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । ६० प्रतिशत नेपालीको पहुँच सामाजिक सन्जालमा रहेको छ । तीमध्ये ५८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार पढ्ने र हेर्ने गर्छन् ।
नेपालमा ७७ जिल्लाका २ हजार परिवारमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार सर्वेक्षण गरिएको सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले जानकारी दिए । यसक्रममा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ३८ हजार व्यक्तिसँग कुराकानी गरिएको थियो ।
२१ असोज २०७५
« तामाङ भाषा लिपि र लेखन शैली (Previous News)
(Next News) लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्ने »